Waa maxay barometerka, waxa cabirkiisa iyo sidee loo adeegsadaa | Saadaasha Shabakadda
Xaqiiqdii waad maqashay in badan oo ka mid ah ifafaalooyinka saadaasha hawadu inay la xidhiidhaan isbeddelada ku yimaadda cadaadiska Hawada. Si loo cabiro cadaadiskan jawiga, the barometer. Waa qalab awood u leh inuu cabbiro cadaadiska ay hawadu saarto markasta. Thanks to barometerka, waxaad ka shaqeyn kartaa saadaasha hawada si aad ugu dhawaato waxa dhici doona iyadoo qalad yar laga badinayo.
Qodobkaan waxaan ku tusi doonaa sida loo isticmaalo barometerka, sida loo cabiro cadaadiska cimilada iyo waxa loogu talagalay.
1 Waa maxay cadaadiska Hawada
2 Waa maxay barometer
3 Sida loo isticmaalo barometerka
4 Daraasada saadaasha hawada
Waa maxay cadaadiska Hawada
Aynu marka hore samayno xasuusin dhakhso leh waxa cadaadiska hawadu yahay. Waa awoodda ay hawadu ku bixiso dhulka halbeeg walba. Waa la dhihi karaa si aan si fudud u fahamno waxa ay culeyska cirka hawadeena aan ku hayno madaxeena culeyskiisa ka dhigi doono. Miisaanka ay hawadu saarto waa waxa aan ugu yeerno cadaadiska Hawada.
Cadaadiskaan wuu is badalayaa iyadoo kuxiran doorsoomayaal kale oo badan sida heerkulka, huurka ama xaddiga shucaaca qoraxda taasi waxay nagu saameyneysaa dusha sare. Si loo cabiro cadaadiskan jawiga waxaan isticmaalnaa cabbiraha. Waa qalab noo oggolaanaya inaan ku cabbirno unugyo mmHg ama HPa ah. Caadi ahaan, waxaan u dhignaa cadaadiska jawiga sidii qiime caadi ah heerka badda. Dusha sare wuxuu leeyahay qiimo dhan 1013hPa. Qiimahan, wax kasta oo ka sareeya waxaa loo tixgelin doonaa inay yihiin cadaadis sare iyo wax kasta oo hooseeya sida cadaadis hoose.
Waa maxay barometer
Marka aan dib u eegno sida cadaadiska hawadu u shaqeeyo, waxaan sharaxaad ka bixin doonaa waxa uu yahay barometerka iyo sida uu u shaqeeyo. Midka koowaad ayaa la alifay waxaa qoray aqoonyahan cilmiga fiisigiska iyo xisaabta oo lagu magacaabo Torricelli sanadkii 1643. Tan iyo waagaas, waxaa jiray xiiso ah in la ogaado qiyamka doorsoomayaasha saadaasha hawadda ee saamaynaya maalinteenna maanta. Dhismihiisu wuxuu ahaa meerkuri wuxuuna ka koobnaa tuubbo silsilad leexsan oo ka hooseysa kana furan xagga sare. Tubbadaani waxay ku taallay kayd biyood ay ku jiraan meerkuri.
Tuubada ayaa u shaqeysay sidii tiir meerkuri ah, taasoo ka dhigeysa mid kore madhan. Sidaa darteed, akhriska waxaa loo fasirtay dhererka tiirka ku jira tuubada dhexdeeda waxaana lagu cabiray mm. Taasi waa halka cabirka mmHg uu ka yimaado.
Saacadda Muhiimka ah ee Suunto ...
Moodelkii labaad ee barometer-ka oo la ikhtiraacay waa kan ugu fiican ee la yaqaan waana aneroid. Waxaa lagu sameeyaa sanduuq bir ah oo gudaha ah halkaasoo faaruqin buuxda lagu sameeyay. Kala duwanaanshaha cadaadiska cimilada ayaa mas'uul ka ah deforming darbiyada sanduuqa iyo kala duwanaanshaha waxaa loo gudbiyaa irbad muujinaysa qiimaha. Waxaa jira kaamirooyin laba jibbaaran oo iyagu sax ka badan
Sahaminta saadaasha hawada barograph ayaa loo isticmaalay. Waa nooc ka mid ah barometer-ka aneroid, laakiin wuxuu ku daabacaa dhammaan xogta warqad garaaf ah. Qiimayaashan waxaa lagu keydiyay garaaf leh dhammaan xogta. Waa mid xasaasi ah oo awood u leh inuu ilaaliyo khadadka cadaadiska 24/7 xilli.
Sida loo isticmaalo barometerka
Si aad u isticmaasho barometer-ka, gaar ahaan aneroid, waa inaad marka hore cabirtaa. Waxaa lagugula talinayaa in lagu saxo meesha saxda ah ee aan ku rakibeyno. Sidaan horay u soo sheegnay, cadaadiska Hawada wuxuu ku kala duwan yahay shaqeynta joog sare iyo doorsoomayaal kale. Fikrad ahaan, sidaa darteed, ku sax si sax ah goobta isticmaalka.
Kala-hagaajinta waxaa lagu sameeyaa fur aan ka helno dhabarka barometerka iyo tornavis. Si tartiib tartiib ah ayaa loogu rogaa bidix ama midig si loo qiyaaso. Kala-beddelka waxaa lagula talinayaa xilliyada xinjirowga lidka ku ah halkaasoo qiyamka cadaadiska uu ka xasilloon yahay. Tani waa muhiim si markaa xogtu u noqoto mid la isku halleyn karo waxaanan leenahay cabbiraad wanaagsan tan iyo bilowgii.
Qalabayntaas qiyamka tixraaca ee lagu aasaasay heerka badda waa la qaatay. Haddii aan rabno inaan dhigno barometerka magaalo ay ku taal dherer cayiman, waa inaan dhowr waxyaalood qabannaa. Midka koowaad waa in la ilaaliyo wadarta cadaadiska kala duwan ee qalabku na tusi doono marwalba iyadoo kuxiran cadaadiska aan ku jirno. Maaha isku mid in la joogo magaalo xeebeed marka loo eego magaalada magaalada ugu dheer Spain.
Ikhtiyaar kale oo aan haysanno waa inaan yareyno cadaadiska heerka badda si loo xakameeyo cirbadda dhabarka barometerka. Waa inaan marwalba isticmaalnaa qiyamka ay dejisay xarunta hawada ee rasmiga ah.
Daraasada saadaasha hawada
Thanks to aaladdan cabbiraadda waan ogaan karnaa oo saadaalin karnaa xoogaa isbeddelada cadaadiska ah sida anticyclones iyo duufaanno. Khariidadaha Isobar waa kuwa laga sameeyay xogta cadaadiska cimilada. Isobar waa xariijin qalooca oo ku biireysa qodobada aan isku cadaadiska nahay. Haddii xariiqyadan ay isku dhow yihiin, waxay ka dhigan tahay inay jiraan isbeddelo cadaadiska jawiga oo la xiriira duufaan. Taas bedelkeeda, haddii aan si ballaadhan u kala qaadnay xariiqyo, waxaan lahaan doonnaa xaalad deggan oo ay ugu wacan tahay jiritaanka anticyclone.
Nidaamyada cadaadiska sarreeya waxay la xiriiraan cimilo deggan oo qorax leh oo leh xaalado deegaan oo wanaagsan oo deegaanka ah. Thanks to xaaladahaan daruuraha ma samaysan karaan mana yeelan karaan horumar toosan.
Nidaamyada cadaadiska hooseeya waa kuwa leh hawo cadaadis hooseysa xaruntooda. Badanaa waxay la mid tahay roobka, maydhasho iyo dabayl xoog badan. Sababtuna waa hawadu kor ayey u kacdaa koritaanka iyo sameynta daruuraha. Qaar badan oo ka mid ah daruurahaasi waxay ku dambeeyaan inay ku samaysmaan horumar toosan illaa ay ka soo baxaan roobab. Tani waxay la xiriirtaa cimilada xun.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan ka ogaan doontid barometerka iyo wax kasta oo la xiriira aaladdan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Qalabka Saadaasha hawada » Barometer
MACLUUMAAD AAD U FIICAN, oo si isku dhafan loo sameeyay, oo si cad oo fudud loo fahmi karo si fiican ... HAMBALYO! Waxaa laga yaabaa inay ahayd inay ku daraan qaar ka mid ah sawiro dheeri ah, maadaama ilahaani uu CAAWIMO si ay si fiican u fahmaan